I-Modern Farmhouse Guest Suite - I-Airbnb
I-Modern Farmhouse Guest Suite
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Michelle
Isitezi sesibili sesitezi esinomnyango wangasese (ngegaraji) nokugeza okuyimfihlo. Impahla yesimanje emisha, ukukhanya kwemvelo okuningi, nokubukwa kwentaba okuhle kakhulu. I-TV engu-55 inch enesidlali se-Blu-ray ne-Netflix. Umbhede we-Queen nomatilasi we-Four Seasons, umbhede usofa, imibhede eyi-twin bed.
Isakhiwo esisha saqedwa ngoJulayi ka-2019. Lesi yindlu yezivakashi zesitudiyo esisitezi sesibili sekhaya lethu. Unomnyango wangasese ngegaraji lethu elikhulu lesitezi. Izitezi zokungena zabelwa ezinye izihambeli ezingase zihlale kwenye indawo eyengeziwe yesivakashi esitezi sesibili, okufana nokufinyelela okwabelwanayo kwebhilidi lefulethi.
I-House itholakala endaweni eyi-3 acre endaweni ethule ezungezwe amasimu epulazi nokubukwa kwezintaba. Imizuzu emi-5 ukusuka kuVictor, imizuzu engama-35 ukusuka eJackson, imizuzu engama-25 ukuya eGrand Targhee. Isisekelo esihle sasekhaya sokuvakashela iGrand Teton kanye neYellowstone National Parks. I-elk bugling izwakala endaweni eseduze ye-elk ranch!
Siyakuthanda ukuhlangana nezivakashi zethu nokukwazi. Sicela ushayele, uthumele umbhalo, noma uthumele i-imeyili ngemibuzo/ukukhathazeka. Imibhalo iyakhethwa. Zizwe ukhululekile ukusibuza mayelana nezidlo zethu zasendaweni esizithandayo, izigigaba, izintaba, nezinto ezihehayo!
Siyakuthanda ukuhlangana nezivakashi zethu nokukwazi. Sicela ushayele, uthumele umbhalo, noma uthumele i-imeyili ngemibuzo/ukukhathazeka. Imibhalo iyakhethwa. Zizwe ukhululekile uk…